Dowladda Somalia oo si kulul uga hadashay maleeshiyo beeleed dagaalamay - Awdinle Online
Dowladda Somalia oo si kulul uga hadashay maleeshiyo beeleed dagaalamay
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta Mudane Mukhtar Xuseen Afrax ayaa maanta isku keenay laba beelood oo wax kale tabanayay oo kuwada nool Gobolka Hiiraan.
Odayaasha labada beelood oo kulanka ka hadlay ayaa waxa ay balan qaadeen in ay diyaar u yihiin in ay si nabad ah uga heshiiyaan colaadii iyo waxyaabihii labada beel kala dhexmaray dhawaanahan.
Kulanka waxaa qeyb ka ahaa Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan iyo waxgarad kale oo ka tirsan labada beelood ee walaalaha ah.
Hawshaan dib u heshiisiinta lakala dhexdhigay beelaha walaalaha ah ee wada dagan Gobolka Hiiraan waxa ay qeyb ka tahay da’daallada nabadda iyo Dib u heshiisiinta oo dhawaanahan Wasiirku uu ka waday Gobolka Hiiraan.
Sidoo kale Wasiirku waxa uu baaq nabadeed u diray beelo walaalo ah oo colaad ku dhexmarayso deegaanno u dhaw degmadd Matabaan ee Gobolka Hiiraan, isagoo ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu joojiyo colaadda wadahadal degdeg ahna la isgu yimaado sida ugu dhaqsiyaha badan.
Previous articleGalmudug oo War Cusub kasoo saartay saraakiishii la laayay
Next articleDowladda Soomaaliya oo xiriirka u jartay Kenya